Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo Oo Cayimay Wakhtiga la Bilaabayo Diwaangalinta Codbixiyeyaasha Doorashada
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa cayimay wakhtiga la bilaabayo diwaangalinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Somaliland. Madaxweynaha ayaa go’aamiyay in bisha 7-aad ee sanadkan la bilaabo diwaangalinta Madaniga ah.
Digreetada Madaxweynaha ayaa u dhigan sidan
Taariikhda: – 12/04/2015
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Mudane. Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu digreeto madaxweyne oo summadiisu tahay JSL/M/XERM/249-3164/042015 ku go’aamiyey in Diiwaangelinta Cod-bixiyayaashu ka bilaabanto Gobollada Dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
Markuu Arkay: Soo jeedinta Guddida Doorashooyinka Qaranka ee summadeedu tahay KDQ/XK/405/2015, ee ku taariikhaysan 09/04/2015 iyo Lifaaqa la socda ee ay ku caddahay Muddada Diyaarinta Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha iyo Muddada Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha;
Markuu Tixgeliyay: Ahmiyadda Diiwaangelinta Cod-bixiyayaashu u leedahay in la qabto Doorasho xor ah oo xalaal ah;
Xeerkan oo lagu go’aamiyey in Diiwaangelinta Cod-bixiyayaashu ka bilaabanto Gobollada Dalka Jamhuuriyadda Somaliland taariikhdu marka ay tahay 21/07/2015.